FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA GOAVAMBE SCHNAUZER - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika goavambe Schnauzer
Boomer ilay olon-dehibe Giant Schnauzer mainty hoditra amin'ny 2 1/2 taona
Anaran-karazany miteraka alika hafa
jahy-uh nt SCHNOW-zer
Ny Giant Schnauzer dia alika lehibe sy mahery ary matevina. Toa dikan-teny lehibe kokoa an'ny Schnauzer mahazatra . Ny haavon'ny alika dia mitovy amin'ny halavany, manome azy toradroa. Ny loha dia matanjaka sy mahitsizoro ny fisehony. Mitovy halava amin'ny tampon-doha ny vavany. Somary mijanona ny fijanonana. Mainty ny orona lehibe. Mainty ny molotra ary tsy mifanindry. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso boribory somary salantsalany, matevina ary mainty. Ny sofina dia apetraka ambony loha ary na voakapa na voahidy voajanahary. Rehefa voakapa izy ireo dia mijoro mahitsy miaraka amin'ny tendrony maranitra. Rehefa avela voajanahary ny sofina dia miendrika V, entina manakaiky ny loha. Mahitsy ny lamosina. Ny tongotra eo aloha dia mahitsy raha jerena amin'ny lafiny rehetra. Atao avo ny rambony ary matetika apetaka amin'ny vitrana faharoa na fahatelo. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny rambon'ny docking sy ny sofina any amin'ny ankamaroan'ny faritra Eropa. Saika esorina hatrany amin'ny tongony any aoriana ny lalàm-panorona, ary mety hesorina eo aloha raha eo izy ireo. Ny palitao avo roa heny dia manana palitao matevina, matevina mafy, ivelany misy akanjo lava malefaka. Ny volo dia mijoro kely miakatra avy any aoriana, miaraka amin'ny volombava, lava kokoa, volombava, volombava sy volomaso. Ny lokon'ny palitao dia tonga mainty sy sira ary dipoavatra.
Ny Giant Schnauzer dia alika miasa manan-tsaina sy mahomby izay milamina amin'ny fampihetseham-batana ampy. Azo atokisana, be herim-po, tsy mivadika, be herim-po ary matanjaka, izy tia ny miaraka amin'ny tompony amin'ny fotoana rehetra. Mora ny mampiofana, mamaly tsara indrindra amin'ny tsy fivadihana sy fahatoniana miaraka amin'ny fihetsika miabo, manome valisoa ny fitondran-tena tsara. Raha voaofana tsara ny Giant Schnauzer ary ampiasaina tsara amin'ny tompona mafy orina, dia manao biby fiompy tena tsara izy io. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo. Ireo Schnauzers goavambe dia mirona amin'ny lafiny mibahan-toerana ary mila tompona izay mahatakatra fihetsika canine ary mahay maneho fahefana, amin'ny fomba milamina, nefa hentitra, matoky tena ary mifanaraka amin'izany. Raha tsy misy izany dia mety hanjary tsy hiaro tena loatra izy ireo ary ho matotra, miaraka amin'ny toetra mafy loha, satria mino izy ireo fa alpha ho an'ny olombelona. hifanerasera tsara manodidina ny olona maro samihafa mba hisorohana azy ireo tsy hampiahiahy ny olona rehetra tsy fantany. Amin'ny alàlan'ny tsy fivadihana tanteraka dia mila aseho azy ireo ny tianao holazaina. Mpiambina goavambe izy ireo ary ny halehibeny dia tsy misakana ny olana. Ny olona goavambe mahalala ny toerana misy azy dia eo ambanin'ny olombelona, ​​mifanerasera tsara ary mandray ampy fanazaran-tena ara-tsaina sy ara-batana isan'andro mazàna dia ho tia olon-drehetra goofball mahafinaritra. Nilaza ny tompona iray hoe: 'Alika fitsaboana ao amin'ny Hopitaliben'i Toronto ho an'ny Ankizy Sick ny Molly anay, saingy hiaro ny tranonay mandra-pahafatiny raha atosika. Ny fianakavianay dia mavitrika tokoa, na hubby na izaho dia manao dian-tongotra roa isan'andro miaraka amin'ny ekipanay ary mandreraka azy ireo izany ary mahafinaritra be ihany koa ho azy mianadahy. ' Ny sasany amin'ireo toetra goavan'ny Giants dia ny fahaizany miavaka amin'ny asa fankatoavana, hakingana, fanaovana sarety ary fiarovana. Raha voaofana tsara dia alika afaka mahavita azy rehetra izy ireo. Mila tompona maneho izy ireo fitarihana tsy miova , na ho tsapan'izy ireo fa anjaran'izy ireo ny mandray izany amboa ambony , mahatonga azy ireo hanjary manjaka amin'ny alika hafa. Raha tsy omena ny habetsaky ny fanatanjahan-tena ary avela hampiasa ny fitaovany manokana dia afaka mihodina ity karazana ity manimba be , raha tsy ampitaina tsara ny angovo sy ny sainy sahirana. Satria izy ireo dia iray amin'ireo karazany lehibe vitsivitsy miaraka amin'ny palitao tsy mandro, manintona izy ireo, fa raha tsy miaraka amin'ny tompona mahay mampiseho fahaiza-mitarika tsy tapaka, dia matetika no omena alohan'ny hahatongavan'ilay alika amin'ny roa taona. Afaka natokana ho an'ny olon-tsy fantatra izy ireo ary tokony nifaneraserana be samy miaraka amin'ny alika sy olona hafa, aleo manomboka rehefa alika kely ny alika. Matetika izy ireo dia tsara miaraka amin'ny biby hafa. Ny goavam-be dia nokolokoloina hatramin'ny alàlan'ny alika mpiambina sy fiambenana. Goavana izy ireo ary manana hodi-kazo tsy an-kijanona, rehefa mandre, mahita na mahita zavatra tsy ananan'ny olon-tsotra.
Haavony: Lehilahy 26 - 28 santimetatra (66 - 71 cm) Vehivavy 23 - 26 santimetatra (58 - 66 cm)
Milanja: Lehilahy 60 - 105 pounds (27 - 48 kg) Vehivavy 55 - 75 pounds (25 - 34 kg)
Mirona kokoa ny olona goavambe cancer noho ny ankamaroan'ny karazany, indrindra ny homamiadan'ny rantsan-tongony izay mamono Giants maro isan-taona na dia tratra aloha aza. Mihombo izy ireo atahorana ny fivontosana . Ny epilepsy dia fahita loatra amin'ity karazany ity ary manjaka ny dysplasia hip.
Ny Giant Schnauzer dia tsy mety amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika ao an-trano izy io ary hanao tsara indrindra amin'ny velarantany.
Ny goavambe dia mila fanatanjahan-tena ary raha tsy vita fatratra farafahakeliny indroa isan'andro dia mipoitra avy eo amin'ny rindrina izy ireo ary sarotra ny miatrika azy, eny fa na dia iray efa voaofana tsara aza dia tsy maintsy mandany ny angovo be loatra namboarina tany am-boalohany na azon'izy ireo atao fotsiny. tsy milamina amin'ny alina. Mila entina isan'andro, haingana, mandeha lavitra , mihazakazaka na mihazakazaka eo akaikinao rehefa mandeha bisikileta ianao, farafaharatsiny indray mandeha isan'andro ampiarahana amin'ny diabe fanampiny na karazana fanatanjahan-tena hafa. Ireto alika mavitrika ireto dia hanao fampihetseham-batana betsaka araka izay tratrany, ary aleony milalao lalao mandritra izay ahafahany mihazakazaka afaka. Raha mahazo Giant ianao dia manaova drafitra amin'ny diabe lava isan'andro, hazakazaka, fitsangantsanganana, bisikileta, filomanosana, na fidirana amin'ny hakingana (làlana misakana), fankatoavana mandroso, Schutzhund (fiarovana), sarety, fanarahana, na hetsika kaninina mitovy amin'izany. Raha tsy manam-potoana hanokana ny iray amin'ireto ianao dia tsy ity no karazany ho anao.
12-15 taona eo ho eo.
Mora ny mijery azy ilay palitao, fa matevina ny akanjo ivelany ary ho lasa matotra izy io raha tsy voakolokolo na borosina isan-kerinandro amin'ny borosy tariby fohy. Esory ny fatotra ary esory aloha ny voam-bary, avy eo manohitra ny voamaina hampiakarana ny palitao. Ny biby dia tokony hokapohina amin'ny lavany lava farafahakeliny inefatra isan-taona ary ny fikarakarana ny sofina dia zava-dehibe hatrany. Ny olona iray dia afaka mianatra mora foana ny fanaovana azy. Ny alika fiompy amin'ny ankapobeny dia voahidy, ary ny alika mampiseho dia mazàna nendahana tanana, izay ny fizotran'ny tanana ny volo mpiambina ivelany na amin'ny rantsantananao na antsy manendaka. Arosoy manodidina ny masonao sy ny sofinao amin'ny hety misy tampoka ary diovy ny volombava aorian'ny sakafo. Tsy manana fofona doggie izy ireo ary mandany kely na tsy misy volo.
Ny Giant Schnauzer dia niandoha tao amin'ny faritra Wurttenberg sy Bavaria any Alemana. Nandritra ny taona manodidina ny fiandohan'ny taonjato, dia samy Pinscher Alemanina malefaka ary Schnauzer volo maditra saribakoly niseho ihany tamin'ireny koa. Ny German Pinscher Schnauzer Club dia nanangana politika mitaky porofon'ny zana-dahatry ny palitao Schnauzer volo maditra ho an'ny fisoratana anarana. Io dia nanampy haingana nametraka karazana ary nahatonga azy ireo ho karazana miavaka amin'ny Pinscher Alemanina . Nomena anarana ireo Schnauzers ireo Schnauzer mahazatra . Ireo Schnauzers mahazatra dia niampita tamin'ny mainty Great Dane ary ny Bouvier des Flandres hamorona ny karazany Giant Schnauzer. Ny anarana Schnauzer dia nalaina avy amin'ny teny alemà 'Schnauze,' izay midika hoe 'molotra.' Ny Giant Schnauzer dia antsoina hoe 'Riesenschnauzer' any Alemana, izay midika hoe 'ilay goavambe.' Ny Giant Schnauzer dia nampiasaina ho alika mpamily omby any Bavaria, ary alika mpiambina nataon'ny polisy sy ny miaramila ary manam-pahaizana ao Schutzhund.
Herding, miasa ny AKC
Lucy, mpamonjy Giant Schnauzer, 3 taona, nanao bandana saina amerikana
Bella ilay mainty sy volafotsy Giant Schnauzer amin'ny faha-3 taonany miaraka amin'ny palitao nohaingoina lava.
Bella ilay mainty sy volafotsy Giant Schnauzer amin'ny alika kely
Bella ilay mainty sy volafotsy Giant Schnauzer ho alika alika amin'ny 8 herinandro
Charlie the Black Giant Schnauzer tamin'ny 2 1/2 taona nitafy bandana American Flag— 'Ity i Charlie, Giant Schnauzer, 2 taona sy tapany. Alika mahafinaritra i Charlie izay feno fiainana ary tia milalao. Charlie dia mety ho ilay goofball ihany. Izy no zanako lahy tsara tarehy, tsy misy taolana ratsy amin'ny vatany! Ny hany tiany hatao dia ny milalao ary mifalifaly. Toy ny Giant mahazatra, mety ho mafy loha izy indraindray. Tiako ny maka sary an'i Charlie ary tiako isa-minitra azoko atao miaraka aminy. '
Sira sy dipoavatra ary olon-dehibe mainty goavambe Giant Schnauzers — Sary natolotry ny Skansen Kennel
'Ity dia Giant Schnauzer Ch. Fanahy Masin'i Galilia. Izy no alika fampisehoana # 1 tany Etazonia nandritra ny taona 2008. Eto izy no mandresy amin'ny seho tsara indrindra amin'ny Onondaga Kennel Association Show tamin'ny volana martsa 2008 tao Syracuse, New York. ' Sary natolotry ny Andrea Barber Photography
Mater the puppy Giant Schnauzer amin'ny 8 herinandro— 'Mba hahalalako bebe kokoa ny alikako, saika mila manodidina ny zanako lahy ianao! Voanjo roa ao anaty paiso izy ireo! 5 taona ny zanako lahy, ary herintaona sy tapany i Mater. Nahazo an'i Mater aho tamin'izy 8 herinandro. Tsy notapahina mihitsy ny sofiny, ka toa nanampy ny toetrany tsara io. Toy ny filazalazana momba ny karazany, miaro izy ary mamoaka hodi-baratra amin'ireo olon-tsy fantatra ary tabataba tsy fantany. Salama tsara izy ifaneraserana ary tia ny alika rehetra, na lehibe na kely. Tsy dia manjakazaka amin'ny karazana alika rehetra efa nahitany azy izy, saingy hanandrana ary hanjaka zaza kely raha matahotra azy izy ireo - noho izany dia mila miditra aho ary asehoko azy izany Izy no alika, ary ireo no olombelona ary afaka matoky azy ireo izy. Mifankahazo tsara amin'ny ankizy 4 taona no ho miakatra izy satria avy eo antitra izy ireo afaka manipy baolina sy mihazakazaka miaraka aminy. ny FANAZARAN-TENA dia mitranga amin'ny kianja filalaovana / zaridaina any ambadiky ny duplex misy antsika ary ny vondrona mahazatra ankizy 8-12 dia milalao miaraka aminy ary tiany izany. Tsy masiaka izy fa miaro. '
Mastiff anglisy 3 volana
Jada the Giant Schnauzer amin'ny faha-7 taonany— 'Jada dia voaporofo fa malina be, miaro fatratra ary mahatoky tanteraka amin'ny maha-alika' Velcro 'marina, tia ny olony izy ireo. Andrasana a alika matanjaka be . Naharitra 6 taona teo ho eo vao nahafehy ny famahanana angovo 'on-off' izy. Ny fanazaran-tena mahazatra dia ilaina amin'ny Giant milamina sy tia fiaraha-monina, ary koa fiofanana hentitra sy maharitra. Izy ireo dia manana fitaomana terrier mavesatra, ary amin'ity habe ity, tena zava-dehibe ny fahaizana vakio ny alikanao . '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Giant Schnauzer
Giant Schnauzer Sary 1
Giant Schnauzer Sary 2
Taranaka Schnauzer Telo
Schnauzers: sary an-tsokosoko azo raisina
st bernard mavo mix mix
manao ahoana ny moka alika
sisin-collie / Aostraliana mpiandry ondry Mix
mixer spaniel sy shih tzu mifangaro
sarin'ny spaniel akoho
mixer husky sy pitbull any Alaska